MULLAAXDA SUUGAANTA: HEESTA BAAQ - WardheerNews
MULLAAXDA SUUGAANTA: HEESTA BAAQ
Diyaariye: Macalin Maxamuud Cali Aadan (Hoorri)
War la helyaaba talo la hel; oo ninba dooxada wax ku soo dadab. Labeenbta iyo miidda hadalku waa godlashada hal-abuurka iyo burqashada suugaan ruugga. Fahamka , dhuuxidda, falanqaynta iyo faaqidaadda gunta gabayga , seeska masafada , xuddunta geeraarka, madiixa giishka , dananka heesaha iyo jaadadka kale ee tixda ayaa laga helaa kobcin aqoomeed iyo itaal garasho.
Ku il-doogso farshaxanka suugaanta, murtida ku dhaadan, dhaxalka ku dheehan, hanitada dhex maaxaysa , baadi-soocda kuugu sugan, isir-raaca iyo haybtaada kuugu keydsan, darka aqoonta iyo kadimada garashada oo loo dhowaado ayaa leh gudasho, kasis iyo kasmo waarta.
Tirsigan, waxa aan ku soo qaadanayaa heestii “BAAQ” waxana lagama-maarmaan ah in uu ogaado qofkasta oo Soomaali ah qaymiga iyo cuddoonaanta suugaanta Abwaan Hadraawi ayna ka mid heesta baaq.
Sidaa owgeed, waxa loo baahan yahay in wax badan laga ogaado qiimaha hadalka iyo farshaxanka faneed, waddaniyadda iyo kadimadeeda aaran, cimilada iyo ilwaadkeeda ilo-xidhan , khayraadka iyo dihnaantiisa, baaxadda iyo bedka dhulka, waxbarashada iyo giraamaheeda kala heerka ah, danaha qaranka iyo mudnaanta amniga, milgaha shaqada iyo tabcashada, waajibaadka iyo oofinta muwaadinka, xuquuqda iyo horumar guud ee dalka laga rabo in la gaarsiiyo.
Bal aan soo qaadano heesta [ BAAQ ] ee uu curiyey Macalin, Abwaan , Maxamed Ibraahim Warsame oo loo garan ogyahay [HADRAAWI] oo ka mid ah suugaantiisa guunka ah. Marna ka mid ah maansadiisa qotada dheer oo sinaba aan looga gayoonkarin. Abwaan Hadraawi waa bare nololeed, faylasoof mudh-baxay iyo gabayaa gaammurey.
Heestan, waxa ku jira Eray-muceedyo gun dheer, sargoyn farshaxan, foolaadnimo tisqaadday. Abwaanku waxa uu ka mid yahay maqaawiirta iyo qammaammuurta saamaynta togan ku leh mareegta suugaanta iyo giraanta nolosha aadanaha iyo geeddi-socodka lagu hiigsanayo neecowda, naqa lagu ladhay nurada iyo sanada sabad joogga le.
Qaybta koowaad waxa uu ku soo gudbinayaa in qofku; iimaansado dhulkiisa hooyo, ku dhaqdo, ku dheefsado, ka dhergo, ku dhaato iyo inuu dhudhun iyo tagoog ba u huro ilaalinta geyigiisa. Marna waxa uu kuu tirinayaa goobaha dalxiiska, dhul-beereedka dihin , bilicda iyo quruxda deegaaan sida: Baydhabo, Qoryooley, Boosaaso, Wajaale iyo Baardheere iwm. Taasina waa baadi-soocdeenna .
Intaas, waxa kuu dheer oo aad ka helaysaa Heesta [ BAAQ] quruxda hiddaha iyo dhaqanka bilan, sooyaalka iyo taariikhda galalkeeda kala jaadka ah. Kama marna inuu soo bandhigo muuqaalka, qalfoofka iyo qaab-dhismeedka dalkeenna hooyo.sida:- goobaha lagu damaashaado, daaqsiinta a saanyado iyo dhirta mucjisaadka badan ee ka baxda dalkeenna sida:- bilcilka, maraaga iyo xijiga oo laga helo xabag, foox, beeyo iyo faleen loo dhoofiyo dalka dibaddiisa.
Kama tegin abwaanku dalagyada kala duwan ee laga helo waddanka sida; Haruurka, Masagada, badarka, muuska, babayga iyo canbaha. Intaas waxa barbar socda ciyaaraha dhaqanka oo aan ka soo qaadan karno Jaandheerta, shurbada, Shiribka, Hana-haybsanta, Haya-hayada dumarka iyo dhammaan wixii la halmaala.Taasina waa baadi-soocdeenna .
Qalabka iyo farsamada Soomaalida ayuu tibaaxayaa abwaanku mar kale oo weliba;kuu muujinayaa anuugga iyo maraxiisa ba. Sida ; waranka , gamaska, billaawaha, barshinka, dafooleyda iyo bayluulida. Abwaanku kama ilduufin inuu daaha ka rogo ilaalinta caadaadka iyo hidde-dhaxaleedka Soomaaliyeed.
Guurka iyo geyaanka hablaha Soomaaliyeed ayuu ku xardhay suugaantiisa, isagoo tilmaamay bilicda iyo qoornimada sumadda u ah dumarkeenna, haa; dhaqan-guurka iyo ka guursiga shisheeyaha qaafilka ah ayuu duray oo weliba dhaleecayn huwiyey, ugana gacan-haatshey barbaarta geed-ka-boodka ah iyo kuwa ku mirooday dhaqamada qalaad. Taasina waa baadi-soocdeenna.
Haddaba abwaan Hadraawi waxa uu yidhi: